18 Diinta - Ku soo dhowow Nederland
Diinta dadka reer Nederland
Berigii hore waxay ahayd waddan Masiixi ah, haddase xaalladu sidaas maaha. Sharci ahaan dad badan baa weli kaniisadaha xubno ka ah, laakiinse xagga rumaysadkooda taasi macno sidaa u weyn uma laha. Laga bilaabo 1960-kii dadka kaniisada tagaa aad buu hoos ugu dhacay. Sannadkii 2000, 62% oo reer Nederland ahi diin shaqo kumay lahayn, taasoo sannadka 2020 kor ugu kici doonta 72%. Berigii hore dadka badankiisu ciyaalka way baabtiisi jireen, kaniisada ayay ku guursan jireen, oo axad kasta kaniisada ayay tegi jireen. Haddase dad ka yar 10% ayaa weli kaniisadah taga. Laakiinse weli waxaa jira dad Masiixiyiin ah oo diintoodu ay aad muhiim ugu tahay, kuwaasoo ay dhalinyaro badani kamid yihiin. Masiixiyiintan badankoodu waxay ku nool yihiin gobollada Zeeland, Zuid-Holland iyo Gelderland iyo Overijssel. Dad badan oo reer Nederland waxay isugu yeedhaan inay dad aan Ilaah aaminsanayn yihiin. Taasoo macnaheedu yahay inaanay rumaysnayn inuu Ilaah jiro.
Protestant-ka iyo Kaatooliga
Masiixiyadda Nederland laba firqo ayay u kala baxdaa. Waxaa jira Roman Kaatolig, kuwanoo uu kaniisadooda madax u yahay boobku. Maryan rumaysadkooda meel muhiim ah ayay kaga jirtaa, kaniisadahoodana sanamyo badan ayaad ku arkaysaa. Protestanku boob ma laha, sanamyo ma laha, Maryana muhiim uma aha iyaga. Iyagu waxay muhiimmada koowaad siiyaan Baybalka. Labadan firqo hal arrin ayay ka midaysan yihiin: Waxay rumaysan yihiin hal Ilaah; kaasoo uumay dhulka iyo samadaba.
Dib u soo noolaynda diinta ee dadka soo galootiga ah
Waxay u muuqataa in Nederland diintii dib u soo noolaanayso, laakiinse taasi waxay ka dhex dhacaysaa dadka soo galootiga ah ee Nederland ku cusub. Islaamku sannad kasta wuu badanayaa. Sannadkii 2000, 5% oo reer Nederland ah ayaa muslimiin ahaa, taasoo sannadka 2020-ka 8% noqon doonta. Masaajida Nederland laga dhisayo iyaguna way bateen. Dadka reer Nederland intooda badan arrintaas dhibaato uma arkaan, waayo xoriyad diineed ayaa waddankan ka jirta. Gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa dad badan oo muslimiin ahi ku nool yihiin. Waxaa kaloo jira kaniisado cusub ay samaysteen bulshooyinka soo galootiga ah ee Nederland ku nool. Waxaa jira kaniisado ay leeyihiin Gaaniiska, Nayjeeriyaanka, Iiraanka, Surinaamiiska iyo dadyow kale oo badani.
Ma doonaysaa inaad wax badan ka ogaato caqiidada kristanka?:
Nolosha Cusub; Dugsiga Nolosha; Somali Mission; Mijn Taal